Biko B GO GHARA: Usoro ụzọ atọ apụ apụ nke na-agaghị akpasu ndị bịara ileta gị iwe | Martech Zone
Wepụ nzube technology (Kedu ihe ọ bụ?). Dijitalụ ahia nke KC na Sunshine Band Biko Agakwala.
Anyị egosila ugboro ugboro site na nyocha A / B na iji teknụzụ ebumnuche iji wepụta mkpuchi nwere ike ịbụ ụzọ dị oke irè iji chekwaa ịhapụ ndị ọbịa. Ihe atụ nke ọdịnaya meghere gụnyere echiche nke koodu ego ma ọ bụ akwụkwọ nbanye ịbanye. Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na nkwụsị ndị a na-ebelata ahụmịhe ndị ahịa. N’iburu nke a n’uche, n’okpuru ebe a bụ ụzọ ole na ole nwere ike inyere gị aka igbochi mmetụta a mgbe ị na-agba mkpọsa maka ọpụpụ.
Tactic # 1 - Akụkụ, Ngalaba, Akụkụ
Enwere ọtụtụ elebara anya na itinye uche gị na ozi ịpụpụ na ụzọ ụfọdụ nke onye ọbịa gị. Chọghị ịchọọ inye ndị ọbịa ọ bụla ebe ahụ onyinye ego willy-nilly. Okwu ego nke koodu ego nwere ike imebi akara gị ma chụọ ndị ahịa na-anaghị eguzosi ike n'ihe. Usoro dị ike karị bụ ịkwụghachi ndị ahịa gị kachasị elu - ezigbo ndị ọbịa gị na-eguzosi ike n'ihe - na ego iji kwado ọkwa ahụ dị oke mkpa nke njide ndị ahịa na ahịa zuru oke.
Otu n'ime ndị ahịa ụgbọ elu anyị, na nso nso a, anyị ejirila data data ndị ahịa na-anọghị n'ịntanetị, data oge na nnọkọ data na omume nchọgharị / ịzụta akụkọ iji zube oke uru, iguzosi ike n'ihe dị elu na ego. Nke a mere ka ebumnuche ọpụpụ dị oke mkpa na-eweta mbuli elu na ntinye akwụkwọ nke 16 ruo 20 pasent gafee mpaghara mmadụ atọ.
N'akụkụ nnweta nke ihe, naanị ihe ị ga-achọ ime bụ nbanye ndebanye akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị mata na onye ọbịa ahụ dị ọhụụ.
Isi okwu ya bụ na ọ dị mkpa ka e lekwasị anya na mkpọsa gị ma chee echiche banyere nkewa nkewa nke nwere ezi uche ma na-arụ ọrụ gburugburu ebumnuche gị (ihe ezubere)
Tactic # 2 - Dị Ka Mmiri
Tactzọ gị ekwesịghị ịbụ ihe a machiri. Chee echiche na mpụga igbe (pun ọzọ ezubere). Gbasawanye mbara igwe gị (dịka Bruce Lee na-atụ aro) ma tụlee ịnye ọdịnaya gị n'ụdị dị iche nke nwere ike ịbụ obere mkparịta ụka ma welie ahụmịhe ndị ahịa, ebe ị na-adọta onye ọbịa ahụ na ibe.
Gbalịa ịkpalite a ndewo mmanya (dịka ozi dị n'elu ihuenyo ahụ, nke onye ọrụ nwere ike ịchụpụ) kama nke mkpuchi brash nke nwere ike imebi nchọgharị na ibe. Ma ọ bụ lekwasị anya na ụfọdụ ọdịnaya nwere mmasị, dịka eziokwu ahụ nwere ike ịbụ obere ngwaahịa ma ọ bụ nnweta dị ala ma webata obere akara:
Iji mepụta akara dị ka nke a, ị chọrọ nkewa iji chọpụta na ụgbọ elu nwere oche ise ma ọ bụ pere mpe. N'ọtụtụ ụzọ, ihe niile na-alọghachi na Tactic # 1 (dịka ị ga-ahụ ọzọ na njedebe ikpeazụ n'okpuru).
Tactic # 3 - Nwee Enyemaka
Kwesighi ịmanye nnukwu ego ma ọ bụ banye ebe a ozi n'ihu onye ọbịa. Nwere ike ị nyere ndị ọbịa bịara na mkpa aka oge kwesịrị ekwesị.
na a akwukwo ndu anyị gbara ọsọ maka onye ahịa na-ere mkpuchi ụlọ, anyị chịkọtara ọtụtụ njirimara ndị ọbịa site na ntinye dị iche iche ka ha na-aga site na olulu - aha (iji nweta okike), ụbọchị ọmụmụ (iji mepụta otu ndị otu afọ) na ndị ọzọ (na-ezo aka Tactic # 1 ọzọ). Na mmechi, ịkekọta akụkụ ndị a ka ị gbanwee usoro ntụgharị na ntinye aka na ibe ọ bụla nke olulu ngwa ahụ nyere anyị ohere ịghọta ọtụtụ isi esemokwu dabere na onye ọbịa ahụ. Otu mmuta bu na ndi nleta no n’agba nke gbara agba kariri nke gbanwere n’ime obere onu ogugu mgbe ha ruru n’otu uzo. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Iji zube ndị ọbịa a site n'enyemaka nke nkata nkata ma ọ bụrụ na ha anọghị otu ọrụ ogologo oge ma gosipụta ebumnuche ịpụ. Nsonaazụ ahụ gosipụtara ntinye aka dị mma na ahụmịhe ndị ahịa, yana ngwa ndị ndị otu na-akpọ ndị ahịa na-azọpụta.
Biko Agana (Apụla)
Veramewanye usoro ndị a na atụmatụ ebumnuche gị ọpụpụ nwere ike ọ bụghị naanị ịkwanye mmụba nke arụmọrụ gị, mana hụ na ị naghị achụpụ ndị ọbịa n'ihi ụzọ mgbe ụfọdụ na-asọ oyi ka ịpụpụ ebumnuche ebumnuche. Na ngwụcha, ahụmịhe ndị ahịa a ka kwesịrị ịnwale, wee nwalee ya mgbe niile, nke mere na ị ji n'aka na ha na-arụrụ ndị ọbịa gị ọrụ. Mana isi okwu a bụ iji nwayọ dọta onye ọbịa ahụ na saịtị gị kama mbido 'biko, biko, alakwala.
Biko agala. Lelee ngwa ngwa anyị na-agụ, Appzọ na-alụ ọgụ maka ebumnuche.
Tags: pụọ divọpụpụ ebumnucheụzọ ọpụpụ nzubeụzọ ọpụpụ popupnwepu ahawebụsaịtị